Kọlụm igwe anaghị agba nchara
Igwe anaghị agba nchara bụ ndebiri nke igwe anaghị agba nchara na-eguzogide ọgwụ. Ọ na-eguzogide ọgwụ mgbasa ozi na-adịghị ike dịka ikuku, uzuoku, mmiri ma ọ bụ igwe anaghị agba, a na-akpọkwa ya nchara nchara. Corrosion eguzogide chemical corrosion media (acid, alkali, nnu, wdg chemical corrosion) Nchara ọkwa ...
316 igwe anaghị agba nchara
1. Atụmatụ: N'ihi na mgbakwunye nke Mo, nkwụsị ya na-emebi, ikuku nkwụsị nke ikuku na ike dị elu dị mma karịsịa, a ga-ejikwa ya n'okpuru ọnọdụ siri ike; ịrụ ọrụ nke ọma magburu onwe ya (na-abụghị magnetik); ike okpomọkụ dị elu ***; siri ike ngwọta ala Non-magnet ...
Polzọ eji achọ ọrụ nke eji eme ihe maka igwe anaghị agba nchara
Commonzọ a na-eji egbu maramara nke igwe anaghị agba nchara bụ imepụta ihe eji arụ ọrụ, na-eme ka kemịkalụ kemịkalụ na kemịkalụ kemịkalụ. Methodszọ atọ a nwere uru na ọghọm ha. 1. Mechanical polishing. Ihe dị na ya bụ na akụkụ ndị ahụ esichara nwere ọkwa dị mma na hig ...
Igwe anaghị agba nchara beads tụnyere
304 bụ ihe a na-ahụkarị na igwe anaghị agba nchara, 7.93g / cm3, nke a makwaara dị ka 18/8 igwe anaghị agba nchara na ụlọ ọrụ ahụ. High okpomọkụ eguzogide 800 degrees, na ezi nhazi arụmọrụ na elu ike, ọ na ọtụtụ-eji ụlọ ọrụ na ngwá ụlọ mma ụlọ ọrụ na ...
Gịnị mere igwe anaghị agba nchara
Otu ụdị nchara nwere ikike iguzogide ikuku oxidation na ikuku ma nwee ikike iguzogide nsị na mgbasa ozi nwere acid, alkalis na salts! Nchara igwe anaghị agba nchara? Na ile anya mbu o yiri ka okwu ugha ...
2020-07-25 15:36:07 Igwe anaghị agba nchara beads arụmọrụ: ekweghị ekwe esịmde 56-58 degrees, magnetik, ezi corrosion eguzogide, na-eyi ndị na-eguzogide na ike igwe anaghị agba nchara bọl ngwa: a ụdị ígwè bọl metal abrasive, isi iche bụ igwe anaghị ígwè ...
Oversized igwe anaghị agba nchara
Igwe anaghị agba nchara bọọlụ na-emekarị na-emepụta site na igwe anaghị agba nchara forging usoro. Ka ọ dị ugbu a, bọọlụ igwe anaghị agba nchara bụ 201, 302, 304, 316, 316L, 420, 440C. Igwe anaghị agba nchara bọl 440 / 440C: arụmọrụ: ekweghị ekwe esịmde 56-58 degrees, magnetik, na-aga ...
Otu esi eme bọọlụ anaghị agba nchara, otu esi emepụta ọtụtụ ihe, yana akụrụngwa mmepụta a
Igwe anaghị agba nchara bụ ihe igwe. Igwe anaghị agba nchara na-ezo aka ígwè na-eguzogide ọgwụ na-adịghị ike corrosive media dị ka ikuku, uzuoku, na mmiri, na na na corrosive media dị ka acid, alkali, na nnu. A na-akpọkwa ya nchara na-eguzogide acid. Na eme ...
Ss304 Nchara Ball, 3mm ọla kọpa, Bọọlụ Bramm 3mm, Ball siri ike, Bọọlụ Brass, Bọọlụ Ọla kọpa siri ike,